वल्लो किरात स्वायत्त प्रदेश सम्बन्धि टिप्पणीहरु – Sunuwar.org
वल्लो किरात स्वायत्त प्रदेश सम्बन्धि टिप्पणीहरु
१. शंकर लिम्बु, सचिब लाहुर्निप
सभासदहरुसँग कुरा राख्दा राम्रो हुन्छ ।
आजको आत्मनिर्णयको अधिकार मौलिक अधिकार हो । यो संविधानमा राखिनु पर्छ । सिद्धान्तता सही छ । तर संविधानमा उठाउँदा सभासदहरुले बोल्नको लागि स्रोत खुलेको इतिहास राखिदिनु भए राम्रो हुन्छ । यो कार्यपत्र भावनात्मक रुपमा लेखिएको छ । त्यतिले मात्र पुग्दैन । शासन व्यवस्था कस्तो थियो । पहिला वल्लो किरातमा ? ती पहिला सञ्चालन भएको न्यायप्रणली उल्लेख गरे राम्रो हुन्छ ।
२. डा. चैतन्य सुब्बा
अपर्भmट टिप्पणी गर्नु भन्नु भयो । इतिहास खोज्ने कुरा धेरुै जटिल छ । आफनो पहिचान जनाउन ऐतिहासिक आधारहरुछप्रमाणित गर्न खोजेका छन् । सिद्धान्तता ठिकै हो । इतिहासमा प्रशस्त उल्लेख छ । इतिहासलाई कहाँबाट टेक्ने हो । त्यो निश्चित हुनु पर्छ । ठाउँको नाम त परपरसम्म पुग्छ । भारटिय अर्थशास्त्रीहरुले त हिमालय रेञ्ज सबै नै किरातीको भन्ने छ । त्यो कन्सेप्ट हो भने भारतीय उपमहदीपमा सबै भनदा पुरानो त सन्थाल मात्र पनि भन्छन् ।
क्लेम के मा हुने ? ऐतिहासिक हेर्ने हो । दमन उत्पीडनकोइतिहास हेर्नु पर्छ । संरचनागत उत्पीडनमा को परेको हो ? त्यही अनुसार अन्तराष्टियरुपमा हेर्नु पर्छ ।
हामी आदिवासी भएकोले उत्पीडनमा परेको छौं । त्यसैले राज्य माग गरेको हो ।
नयाँ संरचना बनाउने क्रममा यति जटिल छ । कुरा पुराएको छ । सुनेको पनि छ होला । जे भए पनि संविधान सभालाई दबाब दिन सक्नु पर्छ । सभासदहरुलाई भन्नु पर्छ । भनेर, विश्वास दिलाएर तपाईको कुरा राख्नु पर्छ । पर्सनल राय भननु हुन्छ भने कुनै कुनै रुपमा आदिवासी जनजातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकारको आधारमा पाउनु पर्छ स्वायत्त क्षेत्र वा राज्य ।
जहाँ खुट्टा घुमाउने हो उनीहरुकै छ । कम्प्रोमाइज कहाँ गर्ने हो ।
राम्रो छ । तर जटिलता पनि छ । तामाङसँग जटिल छ । तामाङसँग मिल्नु पर्छ ।
४५ अड्डालाई ५ अड्डा राखेर राख्नुहोस भने शेर्पालाई ।
मिहेनत गर्नु भएको छ । सराहना गर्छु ।
हाम्रो राजस्वले कर्मचारीलाई तलब पुग्दैन ।
अर्थशास्त्रीहरुको सल्लाह ६, ७ वटा मात्र राज्य बनाउनुहोस ।
हाम्रो भित्रकै कुरा मिलेन ।
अप्रजातान्त्रिक र दवावमा राजनीति चल्दैन ।
धेरै छेत्र लिएर सानो लिएर समुह बन्ने डर छ ।
झगडा नेवा र तामसालिङसँग छ । मगर र गुरुङमा मात्र मेल छ ।
हामीसँग खोलाको आधारमा किरात प्रदेश छुटाइएको छ ।
ककसले सबैको सम्मान जनक निकास निस्कोस ।
प्रदेश भित्र सबै आदिवासीको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्मान दिने छ । पैतृक थलोमा स्वायत्तता दिने निर्णय भएको छ, ककसमा । त्यही १० वटा प्रदेश अडिन्छ कि अडिदैन । तपाईहरुले शेर्पाले नै हटाइ दिनु भएको छ । बल पुराए छिराए । काटी दिने कुरा गर्नु भएन ।
तत्कालै नेवार र तामाङसँग झगडा गर्न पनि सक्दैनौं । उनीहरुलाई सम्मान गर्नु पर्छ ।
३. शान्ति जिरेल
एक वर्ष अगाडिदेखि नै यो अभियान सञ्चालन गरिउको हो । यसमा म पनि बोलेको हो । ककसको अवधारणामा पनि वल्लो किरात राख्यौं । केही माननीय ज्यू हरुले वल्लो किरात प्रदेश हुनु पर्छ । भनेका थियौं ।
खास माग चाहिँ राज्य पुनःसंरचनाले खाका ल्याउनु भन्दा पनि अगाडि हामीले ल्याएको छौं ।
कम्तिमा सुनकोशी रह्यो भने राम्रो । पछि नाम फेर्न सकिन्छ । एक दुई जना मानिसहरुको उपस्थितिले प्रदेश प्राप्त होला ? हामी सबैले चासो दिनु परेउ ।
राज्य पुनसंरचना हुँदा जसको पहुँच छ उसैको राज्य प्राप्त भयो । साँच्चै गरी राज्य पुनःसंरचना समितिमा आप्mनै मानिसहरुले ढाँटे ।
पहुँचको राजनीति भइरहेको छ ।
हाम्रो कुरा कसरी लाने भन्ने कुरामा छ भने वल्ला किरातका कुरा उठाउँदा कम्प्युटर गर्दा आपैंmले हात राखेर हटाउने काम भएको छ । वल्लो किरातका कुरा इतिहास अकाट्य छ ।
४. पासाङ शेर्पा
कार्यक्रमको बारेमा ।
आजको कार्यक्रम हुँदै छ । हिजो मात्र खबर पाएँ । ककसकै कार्यक्रम गर्दा ५० जना मानिस जम्मा गर्दा १५ दिन अगाडि देखि कार्यक्रम गछौं र पाँच पाँच जना जिम्मा लिन्छौं ।
ककसले नै कार्यक्रम गर्ने पो हो कि ।
परिषद, मञ्च र ककससँग मिलेर काम गर्ने छौं । समय अप्ठेरो पर्दो रहेछ ।
ककसले चलायो । सबैलाई चासो भयो । कुनै पनि हालतमा सुनकोशी हटाउनु हुँदैन भनेर पनि आयो । संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा अर्को छ ।
यो के थियो भने एघारवटा विषयगत समितिले बनाएको मस्यौदामा पुनअध्ययन गर्न लागेको छ ।
हामी आपैंmले १४ राज्यलाई छुन आँट गर्न नै सकिएन । वल्लो किरातलाई सिंगो किरातमा राख्न पासाङ शेर्पाको कुनै स्वार्थ थिएन । सुनकोशी हटाएर किरात र तामाङलाई दिने होइन । ककसले भनेको कुरा मानौं भन्ने हुन्छ । भन्न त भनौं पहिचानको आधारमा जातीय राज्य हुनु हुँदैन भन्ने साथी पनि थिए जनजाति महासंघमा ।
आदिवासी जनजातिहरु मिलेर पनि राज्य पुनसंरचना गर्न सक्छन् । मुख्य मन्त्री को हुन्छ ?
अरुले प्रश्न गर्छ । प्रविधिक समस्या छ । मानसिकता ः बाहुन र जनजाति सँगै गएछ । गफ ठूलो गर्ने चलन छ । बल्ला बल्ला खोजेर ल्यायो एउटा हातमा मिनरल वाटर र छाता अर्को हातमा हुन्छ । कसरी राज्य प्राप्त हुन्छ ।
ठिक बाटो हिडाउने भनेको के हो ?
सभासद परिचालन गर्नु हुन्छ भने सभासद फकाउनु हुन्छ ।
बलियो बनाउनको लागि अधिकारले मात्र भात दिँदैन । यो अहिले फाइनल भएको छैन । २१८ मा १५० सम्म जम्मा लिए पछि राज्य पुनसंरचना फाइनल हुन्छ । बनेन भनेर हातखुटटा छाडे राता रात बन्छ । बन्नु पर्छ भन्यो भने बन्दैन ।
गा.वि.स एउटै पनि छोड्दिन भन्नु चाहिँ भन्नु भएन । कम्प्युटर चलाएर कुर्सी सारेर बसेको छु ।
धेरैले गाली गरे – एमालेको सभासद । शान्ति जिरेलले अल्पसंख्यक आदिवासी नथपेसम्म साइन गर्दिन नभनेको भए । आदिवासी शब्द उल्लेख हुँदैन थियो ।
भेला गर्ने काम जनता परिषद र मञ्चको र सभासद बटुल्ने काम ककसको ।
५. डा. लाल रापचा
पल्लो किरात कहाँ गयो ? मुद्र छ । ऐतिहासिक पल्लो वल्लो किरात मिलेर किरात राज्य मागाउँ । ्
६. नविन सुनुवार
किरातहरुको राज्य हुनुपर्छ । आदिवासीहरु सबै किराती हुन् ।
एउटै किरात राज्यको अवधारणा ल्याउनु भयो । एक हौं ।
नेपोल भन्ने शब्दमा किरात इतिहासबाट ।
७. दुर्गा राई, उपाध्यक्ष, किरात राई यायोक्खा
विशेष गरेर मनोविज्ञानबाट पनि गोरेटो अगाडि बढाएको छौं । जिल्लास्तरीय अभियान अगाडि बढाएको छौं । सिंगो हाती बनाउने अभियानमा लागेको छ । मनोविज्ञान
फेरि राज्य आयोगले हाम्रो अधिकार अगाडि जाउँ ।
यति जनसंख्या हुनेले राज्य पाउने भयो भने ।
« गोरखापत्रद्वारा प्रकशित किराँती-कोइँच (सुनुवार)भाषा